Maxaweyne Farmaajo oo Dowladda Sacuudiga ka Codsaday Inay soo kala Dhex Gasho iyaga iyo Dowladda Imaaraadka - Hablaha Media Network
HMN:- Wakaaladda wararka ee Yalla Afrika ayaa shaacisay inuu Madaxweynaha Soomaaliya mudane, Maxamed C/llaahi Farmaajo uu Dhaxalsugaha dalka Sacuudiga, Amiir Maxamed Salmaan Bin C/casiis ka codsaday inuu gacan ka geysto Dhexdhexaadinta muranka Dekedda Berbera ee soo kala dhexgalay dalalka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
Madaxweyne Farmaajo oo Khamiistii hore booqashadiisii ugu horeysay ku tegay dalka Sacuudiga ayaa si cad arinkaasi ugu soo bandhigay kulan khaas ah oo uu la yeeshay Dhaxal-sugaha boqortooyadda Sacuudiga, ahna wasiirka difaaca, Amiir Maxamed Bin C/Casis, waxaana Kulankaasi goobjoog ka ahaa Wasiirka Arrimaha Dibedda ee dalkaasi, Caadil Axmed Al-jubeyr iyo mas’uuliyiin sarsare oo ka tirsan Dowladda Sacuudiga.
Dhinaca kale Shabakadda Wararka ee Riyadh Post.live oo Warbixinta Wargeyska Yalla Afrika u turjuntay Afka Carabiga ayaa qortay in Mas’uul Soomaali ah oo ka mid ahaa Wafdigii la socday Madaxweyne Farmaajo uu warkaasi u dusiyey Saxaafadda walaaca uu madaxweyne Farmaajo ka muujiyey arrintaasi.
Madxweyne Farmaajo waxa uu Dhaxal-sugaha Sacuudiga u sheegay inay Dhexdhexaadintaasi ka qeyb galaan, iyagoo ka faa’ideysanaya cilaaqaadka wanaagsan iyo Isbahaysiga Istaraatijiyadda leh ee ay dowladda Imaaaraadka la leeyihiin, si loo joojiyo Qorshaha Saldhigga Milliteri ee looga dhisayo magaalladda Berbera.
Labo isbuuc ka hor ayay ahayd markii Garyaqaanka Guud ee Qaranka, Dr. Nuur Faarax Jimcaale uu shaaciyey inay Dowladda Federalka ka soo horjeedaan heshiiska, Imaaaradka Carabta iyo Maamulka Somaliand ay ka gaar dhismaha Saldhigga Milliteri ee magaalladda Berbera.
Waxana uu tilmaamay garyaqaanka in DFS ay asktako rasmi ah u gudbinayso Dowladda Imaaraadka oo uu sheegay inay ku xad-gudbeen qaanuunka caalamiga.
Dowladda Imaaraadka ayaa heshiis aysan dowladda Soomaaliya raali ka ahayn la gashay Somaliland oo horey u sheegtay inay Soomaaliya ka go’een sannadkii 1991-kii, balse Somaliland weli ma helin Ictiraaf Caalami ah, marka laga reebo Dowladda Ethiopia oo Safaarad ka furatay magaalladda Hargeysa.